Aung Win Hein (Noble): 11/16/09
“ ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ပါနဲ့။”
တစ်ခါတုန်းက ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် ရာဖေးလ်ဆိုလာနိုအမည်ရှိတဲ့ စိန်ရှာဖွေသူ တစ်ဦးရှိတယ်။
သူဟာ အများနည်းတူ သောင်ခုံသို့သွားကာ
လူလည်း အတော်ပင်ပန်းတယ်။ စိတ်လည်းအတော်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဒါကြောင့် အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့နည်းလမ်းရှာတဲ့အနေနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲအရေအတွက်ကို
ပြီးတော့ ကျောက်စရစ်ခဲအရေအတွက် တစ်သန်းပြည့်ရင်တော်ပြီ၊
ဒီလိုနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲကောက်ပြီးကြည့်လိုက်၊ဘေးချလိုက်နဲ့လုပ်လာခဲ့တာ တစ်သန်းပြည့်ဖို့
နည်းနည်းသာလိုတော့တဲ့နေ့မှာ “တော်ပြီ၊ တစ်သန်းပြည့်ရင် နောက်ထပ်တစ်လုံးတောင်မှ ကိုင်မကြည့်တော့ဘူး။စိန်ရှာတဲ့အလုပ်ကိုလဲ မလုပ်တော့ဘူး။” လို့ထပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်တယ်။
ပြီးတော့ ၉၉၉၉၉၉မြောက်ကျောက်စရစ်ခဲကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်
နောက်ထပ်ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို “ကဲ.....ဒါဆိုရင် တစ်သန်းပြည့်ပြီ။စာရင်းပိတ်ပြီ။ ဆိုပြီးကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။
ဒီကျောက်စရစ်ခဲဟာ အရင်ကျောက်စရစ်ခဲတွေထက် လေးနေပါလား?
ဟုတ်ပြီ။ လေးနေတာတော့အမှန်ပဲ။ နောက်ပွတ်ကြည့်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဒါစိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရမ်းကြီးတဲ့စိန်ရိုင်းတုံးတစ်တုံး။
အခုဆိုရင် ရာဖေးလ်ရဲ့စိန်ကြီးဟာ လစ်ဗရေတာ (Librator) နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားနေတယ်။
ကောက်ရတဲ့စိန်တွေထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးနဲ့ အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးစိန်ကြီးအဖြစ် ဒီနေ့အထိ
ရာဖေးလ်ဟာ တစ်သန်းမပြည့်ဘဲ တစ်လုံးအလိုမှာ လက်လျှော့လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
ဇွဲတင်းပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက် ဇွဲဆုအဖြစ် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့လည်း မီးကုန်ယမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးမှ နောက်ဆုတ်၊လက်လျှော့ပြီး သာမန်ဘဝနဲ့ အဆုံးသတ်ရသူတွေထဲ မှာ ကိုယ်မပါချင်ဘူးဆိုရင်.........
“ ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ပါနဲ့။”။